Kesaa akwukwo ahia gi kachasi nma site na Audible | Martech Zone
Ọ dịla oge kemgbe m bụ onye na - atụ ụtụ aha m na - achọ ma enwere m nkwado na nso nso a. Ihe a na-ege ntị na-agụnye ihe karịrị 250,000 mmemme ọdịyo site na ndị na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ ọdịyo, ndị mgbasa ozi, ndị na-eme egwuregwu, ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ. Audible bu kwa onye kachasi nye ahia nke okwu odi iche-iche nke Apple Store nke iTunes.
Enwere m oge buru ibu karị ege n'akwụkwọ mgbe m na-anya ụgbọala ma ọ bụ na-arụ ọrụ karịa iwepụta oge iji gụọ ha. M ka na-agụ ọtụtụ akwụkwọ, mana arụpụtara m maka ịkụziri onwe m na idebe akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke ndị ọgbọ m mụbara nke ukwuu mgbe m malitere ige ntị na akwụkwọ.
Debanye aha maka ule a na-anụ ọhụụ nke ụbọchị 30
Zụ akwụkwọ ọdịyo gị dị mfe site na ekwentị. Budata Audible ngwa. Nwere ike ịchọpụta akwụkwọ ọdịyo n'ime ma n'elu ikpo okwu na ị nwere ike ịzụta ha na ma Audible saịtị ma ọ bụ Amazon na-eji gị Amazon nbanye. Nchọgharị ha siri ike, ị nwere ike ịchọgharị site na otu, ụdị site na ahịa, mkpa, ma ọ bụ ụbọchị ntọhapụ, chọta nsụgharị abridged, na ụda nke nhọrọ ndị ọzọ.
Ozugbo ịzụrụ, mepee ngwa Audible na akwụkwọ ọdịyo gị ga-ebudata. Inwere ike ige nti na akwukwo odiyo. Otu n'ime njirimara nke masịrị m bụ na m nwere ike ịbawanye ọsọ nke a na-akpọ akwụkwọ ọgụgụ ahụ, na-enye m ohere ige ntị na akwụkwọ ahụ na obere vidiyo.
Audible Na-enweta Social
Audible webatara nso nso a ndumodu akwukwo. Ihe omume ọhụrụ a na-enye ndị na-ege ntị ohere ịnye ndị ọzọ akwụkwọ ọgụgụ ha nwere n’ọbá akwụkwọ ha ozugbo site na e-mail, ederede, Facebook Messenger ma ọ bụ WhatsApp, na-eji ngwaọrụ iOS, Android na Windows 10 ha. Onye nnata ọ bụla na-enweta aha mbụ ya site na mmemme ahụ n'efu, na Audible ga-akwụ ndị edemede, ndị na-eme ihe nkiri na ndị nwere ikike ndị ọzọ nha anya aha nke aha onye nnata ọ bụla!
Atụmatụ ahụ dị mfe iji. Nanị enweta na Ziga Akwụkwọ a akara ngosi n'ọbá akwụkwọ gị, akwụkwọ ọgụgụ ị na-akwado ga-abụ n'efu ma ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ onye nnata gị nabatara akwụkwọ ọdịyo site na njirimara a.
Kedu ihe dị mma na ọ bụrụ na ị bụ onye edemede akwụkwọ nke ewepụtara na usoro Audible? Lee ụzọ dị mma iji mee ka akwụkwọ gị n’aka ndị na-agụ ya!
Ngosipụta: Nke a bụ mkparịta ụka akwadoro nke m dere n'aha Audible. Echiche na ederede niile bụ nke m.
Tags: na-ege ntịntanetiakwụkwọ ahịa